Umthetho Wokungabandlululi we-Airbnb: Ukuzibophezela Kwethu Kokungabandlululi Nenhlonipho - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-August 15, phinda uhlole lapha ngo-July 15, 2020 ukuze uthole okwakamuva.
Umthetho Wokungabandlululi we-Airbnb: Ukuzibophezela Kwethu Kokungabandlululi Nenhlonipho
Imibuzo evamile mayelana Nenqubomgomo Yokungabandlululi ye-Airbnb
Inqubomgomo entsha isebenza khona manje. Kusukela ngo-November 1, wonke umuntu osebenzisa i-Airbnb emhlabeni jikelele uzocelwa ukuba akuseke…
Izinsiza zababungazi Nemivuzo Evame Ukubuzwa mayelana nokungabandlululi
Sikukhuthaza ukuba usebenzise izici zokwethenjwa namathuluzi okuxhumana esiwakhele ukukusiza ube nokuthula kwengqondo. Uma ucabangela isicel…